Kudutshulwe umsolwa ngelenkunzi kwaBester eThekwini | News24
Kudutshulwe umsolwa ngelenkunzi kwaBester eThekwini
Durban - Kuboshwe indoda eneminyaka engu-23 ubudala ngezithuba zabo-10:30 endaweni yakwaBester ngokuphanga ihlomile.
Le ndoda ibihamba namanye amabili ngesikhathi bebamba inkunzi owesifazane oneminyaka engu-28 ubudala obelinde izinto zokuthutha phakathi komgwaqo uNyala noNtuzuma Access Road bemkhombe ngesibhamu bamphuca izimpahla zakhe ngaphambi kokubaleka.
Isisulu sibe sesimemeza sifuna usizo, sasizwa yiphoyisa ebeselishayisile.
OLUNYE UDABA: Kuboshwe umsolwa ngelokubamba inkunzi eGoli
Amabili kula madoda adle phansi kwasala eyedwa yalwisana nephoyisa ilikhiphele i-screwdriver.
Ngesikhathi iphoyisa limexwayisa ukuba ayeke akwenzayo yona yaba nenkani, kuphoqeleke ukuba iphoyisa lidubule umsolwa onyaweni.
Umsolwa njengamanje usesibhedlela lapho aqashwe ngelokhozi ngamaphoyisa.
UKhomishana wamaPhoyisa aKwaZulu-Natal, uLieutenant General Mmamonnye Ngobeni, ushayele leli phoyisa ihlombe ngomsebenzi walo omuhle.
"Siyathemba sizozibamba nalezi ezinye izigelekeqe kungekudala."